EVY's Kitchen: ကြက်သားပေါင်း
Thanks, Evy for the recipe. Feeling hungry already.
အစ်မအိုင်ဗီ ချက်ထားတာလေးက စားချင် စရာလေး။ တော်လိုက်တာ။ အဲ့လို ခဏ တဖြုတ် တီဗီမှာ မြင်ရုံနဲ့ ပြန်ချက် တတ်တယ်း)
ဒါလေးတော့ လုပ်ဖြစ်အောင်ကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ရမယ် Evy ရေ...စားချင်စရာကောင်းလိုက်တာ
အဟုတ်ပဲ.. စားချင်စရာ ကောင်းလိုက်တာ ။
ချစ်ဖို့တောင်ကောင်းသေးတယ် ကြက်သားပေါင်းလေးက..း)
စလုံးမှာတော့ ဒင်းဆမ်းဆို စားစားနေတာ။ ခုမှပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ သိတော့တယ်။ ingredients တွေဖတ်ရတာ လုပ်စားကြည့်ချင်စရာပဲ မအယ်ရေ။ ကျေးဇူး။
ဘိတ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်.. လာငတ်သွားပါတယ်.. :D
ရောက်၏ စားချင်လှပါ၏း)
မမဘေဘီ နေကောင်းသွားပြီလား ။ ပျောက်နေတာကြာလှပြီ
Catherine Cho said...
where can i get these yellow layers for it??
Hello, you can find these wanton sheets in NTUC.
မမ..water chest nut ဆိုတာမြန်မာလိုကျဘာကိုပြောတာလဲ မသိဘူးဖြစ်နေတယ် NTUC မှာရောရလားမမ...ကျေးဇူးပါနော်...စားချင်စရာလေး လုပ်စားကြည့်မယ်...း)
ညီမရေ ဗမာလိုတော့ ၀က်မြေစာဥဆိုလား ခေါ်တယ်ကြားဖူးတယ်။ NTUC မှာ ရတယ်။ ဖော့ပုံးအဖြူအကြီးထဲမှာ ထည့်ပြီးရောင်းလေ့ရှိတယ်။ ရွံ့တွေလူးနေတာလေ။ အဲဒီဟာပဲ
ချစ်စ၇ာလေး ကြက်သားပေါင်းလေးတွေက လုပ်ကြည့်အုံးမယ် .. ကျေးကျေးပါ
thanks for the recipe sis Evy... will do it this weekend ;)